Ithegi: ukuhamba | Martech Zone
Iposi elikwiXesha lokuThengisa eliChukumisayo kwiiHotele
NgoLwesibini, Januwari 23, 2018 NgoMvulo, nge-18 kaJanuwari, 2021 Douglas Karr
Yikes… ukuba awuyibonanga imeko yakutshanje phakathi kokunyuka kwefuthe losasazo lwasentlalweni uElle Darby noPaul Stenson, umnini weDublin yeWhite Moose Café kunye neCharleville Lodge. Xa u-Elle Darby ethathe isigqibo sokuya eholideyini, wafikelela kwiihotele ezininzi anokuba nomdla wokuhlala kuzo ukuze abone ukuba zinokubonelela ngokuhlala kwintengiso kwintengiso ethile kubaphulaphuli beendaba zakhe. Akukho mntu ucela iisenti zam ezimbini,
Lwesine, Okthobha 22, 2015 Douglas Karr
Ubuchule buza ngendleko. U-Uber uchaphazela kakubi ishishini leeteksi. Unomathotholo we-Intanethi uchaphazela usasazo nomculo kwimithombo yeendaba zemveli Ividiyo efunekayo ichaphazela iifilimu zesiko. Kodwa le nto siyibonayo ayikokugqithiselwa kwemfuno, yimfuno entsha. Ndihlala ndixelela abantu ukuba okwenzekayo ayisiyiyo enye imboni ebulala enye, kungenxa yokuba amashishini emveli akhuselekile kwimida yenzuzo kwaye azibulale kancinci. Yifowuni kuyo nayiphi na imveli
Ukuba ufuna uncedo okanye ubuchwephesha bokukhangela obuhlawulelweyo, isibonelelo esikhulu phaya yi-PPC Hero, upapasho olukhulu apho ukuthengiswa kweHanapin kwabelana ngobungcali babo. Kutshanje uHanapin ukhuphe le infographic emnandi, Iingcebiso eziPhezulu zePPC ezilishumi zokuHamba kunye neMarketmark. Ngelixa imeko yokusetyenziswa kukuhamba kunye nokhenketho, ezi ngcebiso zilungele nakuphi na ukuthengisa okufuna ukubandakanya indlela yokusebenza yokukhangela ehlawulelweyo kwiindlela zabo zePPC (Hlawula ngokokuCofa). Ngama-65%
NgoMvulo, nge-22 kaDisemba ngo-2014 NgoLwesibini, nge-23 kaDisemba ngo-2014 Douglas Karr
I-Usablenet ilungiselele uthotho olutsha lwe-infographics ebonisa ukuvela ngokukhawuleza kweselfowuni kushishino lokuhamba, kunye nezibalo ezithetha ngokunyuka komhambi wale mihla, iziphumo ezothusayo zokuthembeka kweselfowuni ezinokuba nazo kubungakanani bokubhukisha, ukuba iwaka leminyaka libeka njani phambili iselfowuni. kwizigqibo zabo zokuhamba, nangaphezulu. Uthotho olupheleleyo lubandakanya ukuthatha izinto ezinje nge: Millennials ikhokelela kwintlawulo yokuhamba okuhambayo: uninzi lwabahambi abahambahambayo ngabathengi phakathi kweminyaka engama-25-44 ubudala.